Doorashadii Burundi oo waqtiga loo kordhiyay – Radio Daljir
Luulyo 12, 2015 5:27 b 0
Axad, Luuliyo 12, 2015 (Daljir) — Doorashada Madaxweynenimo ee dalka Burundi ayaa xilliga loo kordhiyay, kaddib Wareegto kasoo baxday maanta oo Sabti ah Xafiiska Pierre Nkurunziza, taasoo lagu sheegay in doorashadu ay socon doonaan illaa 21-ka bishan July.
Xilliga loo Qabtay doorashada madaxnimo inay kusoo gaba-gabowdo 15-ka Bishaan July ayaa la sheegay inay Carqaladeeyeen dibadbaxyo iyo rabshado dalkaas ka dhacayay tan iyo markii ay ka billaabatay doorashada, kaddib markii mucaaradka Burundi ay ka Caroodeen ka qayb-galka uu doorashada ka Qayb-galayo Madaxweynaha Dalkaas oo doonaya in mar kale uu dalkaas xukumo shanta sano ee soo socota.
Waddamada EAC oo isku dayaya inay xiisadaha ka taagan dalkaas xalliyaan ayaa Isniintii lasoo dhaafay ka dalbaday Madaxweyne Nkurunziza inuu dib u dhigo Doorashada Muddo laba Toddobaad ah oo ku beegan 30-ka Bishan July, si loo xaliyo dhexdhexaadiyo Xisbiga Xukunka haya ee CNDD-FDD iyo Isbahaysiga Mucaaradka ah.
Doorashadii baarlamaanka dalka Burundi oo uu guul weyn ka sheegtay xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweynaha ee talada haya oo dhacday 29-kii bishii May ee la soo dhaafay ayaa waxaa kasoo horjeestay asxaabta mucaaradka ah, iyadoo sidoo kale ay Beesha Calaamku Cambaareysay.
Mucaaradka iyo Ururrada Xuuquqda Aadanaha ee Dalka Burundi ayaa sheegay in Pierre Nkurunziza oo dib loo doorto ay la midno tahay in la jabinaysa dastuurka dalkaas u yaalla, iyagoo Xusay in Labadii xilli ee uu madaxweynuhu xaqa u lahaa inuu Xukunka hayo ay u dhammaatay.
Madaxweyne Gaas oo Afur Garowe ugu sameeyay Arday ka Qayb-gashay Tartan Qur’aan